विमल, अन्जन र दिनेशको साग भविष्य अन्यौलमा ! | Hamro Khelkud
हफिजको उत्कृष्ट बलिङमा वेस्टइन्डिजमाथि पाकिस्तानको जित
विमल, अन्जन र दिनेशको साग भविष्य अन्यौलमा !
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– अनुशासन उल्लङ्घन गरेका कारण अघिल्लो साता राष्ट्रिय टोलीबाट हटाइएका विमल घर्तीमगरसहितका ३ खेलाडीको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा सहभागिता अन्यौलमा रहेको छ । तीनै खेलाडी अहिलेसम्म टोलीबाहिरै रहेका छन् ।
स्वयम्भुमा शुक्रबार बिहान सागको ओलम्पिक टर्च लाइट र्‍याली सुरु हुँदामा फुटबलसँगै अन्य खेलका पनि खेलाडी तथा प्रशिक्षक उपस्थित हुँदा फुटबल टोलीमा रहेका विमल, अन्जन विष्ट र दीनेश राजवंशी भने देखिएनन् । कुवेतविरुद्ध विश्व कप छनोटका लागि भुटान जानुअघि अघिल्लो रात तीन खेलाडीसहित सन्तोष तामाङ डिस्कोमा मादक पदार्थ सेवन गरेर बसेको भन्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले उनीहरुलाई टोलीबाट हटाएको थियो । सन्तोष भने सागको टोलीमा थिएनन् ।
गत शनिबार भुटान जानका लागि विदाई कार्यक्रम अघि चार खेलाडीलाई टोलीबाट हटाइएको जानकारी गराइएको थियो । त्यसपछि उनीहरु विदाई कार्यक्रममा सरिक नभइ घर फर्कनु परेको थियो । त्यसयता साग टोलीमा रहेका अन्जन, विमल र दिनेश प्रशिक्षणमा समेत सामेल भएका छैनन् ।
यस विषयमा एन्फाको अनुशासन समितिले छानविन गरिरहेकाले के गर्ने भन्ने विषय अझै नटुंगिएको एन्फा स्रोतले बताएको छ । ‘अनुशासन समिति पनि स्वतन्त्र समिति जस्तै हो । उक्त समितिको काममा हस्तक्षेप गर्ने हुँदैन, ‘स्रोतले भन्यो, ‘समितिले कस्तो रिर्पोट बुझाउँछ त्यसका आधारमा थप कारवाही गर्ने वा टोलीमा फर्काउने निर्णय लिनेछौं । त्यसका लागि अझै केहि दिन लाग्न सक्छ ।’
राष्ट्रिय टोलीमा कारवाहीमा परेयता साग टोलीमा पनि विमल, अन्जन र दिनेशले अभ्यास गरेका छैनन् । साग टोलीमा फर्काउने वा नफर्काउने विषयमा एन्फा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले आवश्यक निर्णय लिने टोलीका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले बताए । ‘उनीहरु फर्केको खण्डमा यहि टोली हुनेछ ,’ महर्जनले भने, ‘यदि उनीहरु नफर्काउने निर्णय भएको खण्डमा त्यसको सट्टा अरु खेलाडी थप्नु पर्ने हुन्छ । ‘
नेपाल सागको फुटबलको साविक विजेता हो । सन् २०१६ मा भारतमा भएको १२ औं सागमा भारतलाई हराउँदै नेपाल च्याम्पियन बनेको थियो । च्याम्पियन टोलीमा विमल, अन्जन र दिनेश सदस्य थिए । यसपटक पनि तयारी सन्तोषजनक भइरहेको प्रशिक्षक महर्जनले बताए । ‘उपाधि रक्षा गर्नु चुनौतिपूर्ण हुनेछ । दक्षिण एसियाका टोलीबीच धेरै ठूलो अन्तर छैन । सहज कसैलाई हुँदैन,’ उनले थपे, ‘हामीले तयारी राम्रै गरेका छौं । मैत्रीपूर्ण खेलमा पनि राम्रै भयो । घरेलु मैदानमा हामी अझै राम्रो गरेर उपाधि रक्षाको प्रयास गर्नेछौं ।’